Postmates - Local Restaurant Delivery & Takeout 5.2.4 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.2.4 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
Application မ်ား စားစရာ & ေသာက္စရာ Postmates - Local Restaurant Delivery & Takeout
Postmates - Local Restaurant Delivery & Takeout ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သင်အကြိုက်ဆုံးစားသောက်ဆိုင်များ, 24/7, 365 ရက်တစ်နှစ်ကနေအစားအသောက်ပို့ဆောင်မှု။ သင်ကလိုတဲ့အခါ Postmates, သင်ချင်သင်သည်အဘယ်သို့ရရှိသွားတဲ့။ ရုံက Postmate ။
Postmates နှင့်အတူအမိန့်ဘာဂါ, ဆူရှီ, ပီဇာနှင့်ပိုပြီး:
• 500,000+ ပြည်တွင်းနှင့်အမျိုးသားရေးစားသောက်ဆိုင်များနှင့်လက်လီရောင်းချသူများ။
•မြေပြင်ပေါ်တွင် 300000+ Postmates, သင်သည်တစုံတခုကိုရောက်စေဖို့အဆင်သင့်။
•အမေရိကန်နှင့်မက္ကဆီကို 3,000+ မြို့ကြီးများနှင့်ရေတွက်။
•အချိန်နှင့်တပြေးညီအလို့ငှာခြေရာခံခြင်း, သင်သည်သင်၏ပေးပို့တိုးတက်မှုအပေါ် updated စောင့်ရှောက်ခြင်း။
•တစ်ဦး Unlimited အသင်းဝင်နှင့်အတူ $ 15 ကျော်အားလုံးအမိန့်အပေါ်အခမဲ့ဖြန့်ဝေ။
• Takeout အမိန့်အဘို့အသုံးပြုမှု Postmates Pickup, မျဉ်းနှင့်အဖိုးအခကိုကျော်သွား။
နယူး•! သင်တို့ပတ်လည်ယိသောအရပ်တို့ကိုတိုင်း5မိနစ် updated နှင့်မျှမပို့ဆောင်မှုစရိတ်များရှိရာ Postmates ပါတီအပိုင်း!
Postmates သင်ချင်တဲ့အခါသင်ချင်သမျှကိုကယ်နှုတ်တော်မူရန်ပထမဦးဆုံး App ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့မဆိုစတိုးကနေမဆိုစားသောက်ဆိုင်နှင့်ကုန်သွယ်ရာမှအစာအာဟာရမကယ်မလွှတ်။
BRAND သင်ပါလိမ့်မယ်တစ်ခုတည်းသော POSTMATES ON FIND
Sugarfish, Sweetfin, ဤကဲ့သို့ပီဇာ, ဆား & Straw, အဆိုပါကော်ဖီ Bean ကို & လက်ဖက်ရည်အရွက်, Bluestone လိန်း, KazuNori, HiHo Cheeseburger, Uovo, အဲဖရက်ကော်ဖီ, Trejo ရဲ့ Taco, ဂျုံးရဲ့တတိယဟော့ Wings ကဖေးပေါ်အိမ်နောက်ဖေးပန်းကန်, ကြက် Roscoe ရဲ့အိမ်နှင့် Waffles, ပန်းရောင် Dot, 800 Degrees Neapolitan အဘိဓါန်ပီဇာဆိုင်ကို, မွန်းဖျော်ရည်များနှင့်ရာပေါင်းများစွာကိုပို။
Chloe အားဖြင့် Chipotle, ထို Box မှာ sweetgreen, Shake လာပြီးအတူတူနေနေကြပါတယ်, မြေအောက်ရထား, တင်ဒါဂရင်း, Popeye, ဂျက်, ။ , ဤကဲ့သို့ပီဇာ, Dennis ရဲ့, PF ပြောင်းလဲမှု, IHOP, Walgreens, အဆိုပါဟလာလ်ယောက်ျားများ, Panera ပေါင်မုန်, Jamba ဖျော်ရည်နှင့်ရာပေါင်းများစွာကိုပို။
လည်း FROM မှ Delivery GET
မက်ဒေါ်နယ်, ဘာဂါဘုရင်, Taco Bell, Del Taco, Wendy ရဲ့, ယင်း-္တရ-A, Wingstop, အဆိုပါ Cheesecake စက်ရုံ, Starbucks ကနှင့်ရာပေါင်းများစွာကိုပို။
Delivery အချိန်မရွေး, နေရာမရွေး
သငျသညျမှာအနေလေရာရာ၌ပါတီ-ကျနော်တို့က Postmate, သင်ကခငျြအခါတိုင်း, သင့်အိမ်, အိပ်ဆောင်, ရုံး, ပန်းခြံ, သို့မဟုတ်သင့်နောက်တစ်နေ့ညစာစားဖို့ကယ်နှုတ်တော်မူပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပေးပို့ပလက်ဖောင်းသင့်ရဲ့အမိန့်အမြန်ဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ပေးပို့များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သော Postmate ဖို့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်သေချာစေရန်အကောင့်သို့အချိန်နှင့်အကွာအဝေးကြာပါသည်။
$ 9.99 / လဘို့ Unlimited join နှင့်သင် $ 15 ကျော်အမိန့်အပေါ်အခမဲ့ဖြန့်ဝေရပါလိမ့်မယ်။ ကမ်းလှမ်းချက်ကို Love? သငျသညျတခုနှစ်ပတ်လည်အစီအစဉ်အဘို့အ sign up ကိုရသောအခါ 17% သိမ်းဆည်းပါ။
အကူအညီလိုတယ်? ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာ့အဆင့်မီဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအသင်း 24/7 ရရှိနိုင်ပါသည်။ help.postmates.com: သင်အမြဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်
သည် Albuquerque, အတ္တလန်တာ, Austin, Baltimore, Bellevue, ဘော်စတွန်ဘရွတ်ကလင်, Charlotte, ချီကာဂို, စင်စင်နာတီ, ကိုလံဘတ်, Cleveland, Dallas မြို့, Denver, ဒက်ထရွိုက်, အရှေ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, Evanston, ဝိန်း Fort Lauderdale, ဟိုနိုလူလူ, Houston Indianapolis, ဂျာစီစီးတီး, Kansas City, Las Vegas မှ, Long Beach, Los Angeles မြို့, Louisville က, Madison, မိုင်ယာမီ Milwaukee, Wisconsin Minneapolis, Nashville, New Orleans, Newark, နယူးယောက်စီးတီး, ဥက္ကလာဟိုးမားစီးတီး, Omaha-, Orange County မှာ Orlando, Palm Springs, Philadelphia တွင်, Phoenix မြို့, Pittsburgh, လက်ပံ , Queens Raleigh, Sacramento, San Antonio တွင်, စန်တာဘာဘရာ, စန်း Bernardino, San Diego မှဆန်ဖရန်စစ္စကို, Salt Lake City, ဆီယက်တဲလ်, SF ကျွန်းဆွယ် / ဂလားပင်လယ်အော်ဧရိယာ, စိန့်လူးဝစ်, Tampa, တာက်ဆန်, ဗာဂျီးနီးယားသဲသောင်ပြင်, ဝါရှင်တန်ဒီစီ။
Google က Pay ကို, Credit Card ကို, မြီစားကတ်။ ဗိုလ်မှူးခရက်ဒစ်ကဒ်များ: ဗီဇာ, American Express, MasterCard, Discover ။ အားလုံးအရောင်းအ, ငွေသားအဘို့မလိုအပ် 100% ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြစ်ကြသည်။
ပို့ဆောင်မှုစရိတ်အသုံးအနှုန်းများနှင့်အခြေအနေများအတွက် $ 100: သာပထမဦးဆုံးအချိန်ဖောက်သည်များအတွက်တရားဝင်ငှေပါ။ ဝန်ဆောင်မှုအခကြေးငွေကွဲပြားခြင်းနှင့်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုသူတည်နေရာပေါ်အခြေခံပြီး Store နဲ့ကမျးလှမျးခကျြရရှိနိုင်မှု။ ဖောက်သည်တစ်ဦးလျှင် 1 အသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်။ ကမ်းလှမ်းမှုကို sharable သို့မဟုတ်လွှဲပြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ရွေးနှုတ်အပြီး 14 ရက်များအတွက်သာတရားဝင်ငှေပါ။ $ 100 ဦးအထိအများဆုံးကမ်းလှမ်းမှုကိုတန်ဖိုး။ ကမ်းလှမ်းမှုကိုငွေသားသို့မဟုတ်ဖလှယ်မှုနဲ့တူရွေးနှုတ်တော်မူမရနိုင်ပါ။ Postmates အသိပေးစာမပါဘဲမည်သည့်အချိန်တွင်ဤကမ်းလှမ်းချက်ကို modify သို့မဟုတ်အဆုံးသတ်ခြင်းရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
Postmates - Local Restaurant Delivery & Takeout အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Postmates - Local Restaurant Delivery & Takeout အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Postmates - Local Restaurant Delivery & Takeout အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Postmates - Local Restaurant Delivery & Takeout အား အခ်က္ျပပါ
michael-belisle စတိုး 2.82k 764.3k
Postmates - Local Restaurant Delivery & Takeout ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Postmates - Local Restaurant Delivery & Takeout အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 5.2.4
ထုတ်လုပ်သူ Postmates Inc.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://postmates.com/privacy
လက်မှတ် SHA1: 5D:16:5E:5F:B0:4A:03:2D:12:E0:02:B3:0C:9C:69:D9:7B:9F:1A:5F
အဖွဲ့အစည်း (O): Postmates
Postmates - Local Restaurant Delivery & Takeout APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ